Yjie akasaina chibvumirano chekudyidzana pamwe neWutan Zhongda Boka
Mangwanani eAugust 5th, mhemberero yekusaina kwechibvumirano chekudyidzana pakati peYJIE PLASTICS CO., LTD neWutan Zhongda Group muRuwa rweHuangyan rakaitirwa muTaizhou. Wang Tingge, sachigaro weChina National Resources Group, uye He Yitao, maneja mukuru weYJIE, vakapinda t ...
Pamasikati aAugust 27th, "Ndapota huyai mutaurirane" - "Maitiro ekuvandudza emhando yepamusoro Huangyan kuumba indasitiri" uye "Yakazvimirira Ehupfumi Komiti Yekugara Kamuri" zviitiko zvakaitwa. Iye Yitao akamiririra Huangyan YJIE mapurasitiki Co, ltd kutora chikamu. Kutarisa o ...
Huangyan Yjie akatumira 352,700 yuan yevadzidzi varombo
Munguva pfupi yapfuura, iyo Huangyan YJIE Plastics Co, Ltd yakarongeka Vashandi kuti vaite 2020 yegoridhe mumatsutso mabasa evadzidzi. Vanoda kusvika makumi mashanu vanozvipira kubva kuKambani vakaenda kuchikoro uye vakatumira rubatsiro uye zvekushandisa kuchikoro kuvadzidzi vane makumi maviri nevaviri varombo mudunhu iri. Mipiro yese yaive 352,70 ...
Barware Set, Kurongedza Bhodhoro Rewaini, Yekusimudzira Barware, Plastiki Barware, Isingaputsike Barware, Chikafu cheGiredhi Pet mabhodhoro,